Somalitalk bog layaab leh !
Axmed Abuukar, Boosaaso, Puntland - Somalia
Aad baan u soo dhoweeyaa marar badanna waa booqdaa, maxaa yeelay wuxuu u dhisan yahay si cilmiyaysan gaar ahaan habka wararka xiriirka leh aad u soo taxdaan iyo linkiyada markhaantiga ah ee qormooyinkiinna ku lifaaqan.
Waxase la yaab leh laba arrimood oo ay Somalitalk caado u leedahay oo aan is leeyahay waa ku khaldan tahay ee ha iska beddesho ama ha caddayso sababta ay sidaas u yeeleyso.
1. Waa ta hore e, Somalitalk waxay daba dhigatay khayraadka dabiiciga ah, si basaasnimo ah ayey wararkaas u daba gashaa haba daba gashee sharci darro iyo xaaraan ayey u aragtaa in Puntland ay la soo baxdo khayraadkeeda dabiiciga ah ee dadka arrintaas ka qanciya danta aad ka leedihiin, danta dadkuna sidaas ma aha ee waa in ay wax ka dhadhamiyaan khayraadka dabiiciga ah.
2. Wararka ku saabsan gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya, Somalitalk waxay u hadashaa ama qolyaha mucaaradka ah ugu adeegtaa sidii waagii Somali weyn la raadin jirey, waana fikrad gabowdey, gobolka Soomaalidana si sharci ah ayuu uga tirsan Itoobiya, yahay adduunkuna u aqbalsan yahay Soomaaliduna waaba ka hartay oo arrintaas waxaa kaga weyn sidii la isu oggolaynsiin lahaa wixii ka haray Soomaali weyn ee Somaliland iyo Koonfurta.
Jihaadka aad sheegtaan muxuu yahay, dhulkase dadka uu ka maqan yahay maye, idinka keliya ayaa la idinka maqlaaye, mise itixaadka ka dagaallama gobolkaas ayaa Somalitalk wax ku leh.
Waad u fasaxan tihiin aragtidayda haddii aad daabacaysaan.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh qoraaga ku saxiixan.....
Faafin: SomaliTalk.com | May 27, 2006
Saamiyada Range Resources
oo hoos u dhacay... ASX::
25 May 2006 0.036 -2.7%
19 May 2006 0.037 -5.13%
18 May 2006 0.039 2.63%
17 May 2006 0.038 -2.56%
16 May 2006 0.039 -2.5%
Garaafka oo weyn ka eeg halkan... Guji...
MADAXWAYNE CADDE MUUSE OO SIDII MOORYAANTA U HADLAY!!!
.....Waxaase Somaalida Amakaagg iyo Af-qabsi ku riday Gen. Cadde muuse oo isaguna qaaday waddadii Maxamed Dheere. Markii uu 19 kii bishaan ku dhawaaqay in uu kalsoonidii kala noqday Ra�iisul-wasaaraha DF. Md. Dr. C.M. Geeddi ama haddan sii caddeeyo D,F. ee KMG oo dhan.... Guji...
Dad uu cadowga Itoobiya meelo kala duwan ku laayay iyo kuwa uu xidhxidhay.
Ciidammada gumaystada Itoobiya, oo toddobaadyadan denbe sii kordhiyay xasuuqii ay dadwaynaha rayadka ah ku hayeen, ayaa meelo kala duwan oo dalka ka mid ah ku dilay dadwayne rayad ah oon waxba galabsanin, waxayna kala yihiin dadka ay magacyadoodu na soo gaadheen;
Markii ay taariikhdu ahayd 18/05/06 waxay ciidammada cadowgu ku dileen San-xaskulle, oo ka tirsan degmada Dhagaxmadow, labo nin oo shacab ah, waxayna kala yihiin;
1- Deeq Axmed Wali, oo markii ay dileen ay ka qaateen Qori uu watay iyo 3300 oo Bir.
2- Axmed C/qaadir, ooy isagana ka qaateen Qori uu watay.
Waxay isla San-xaskulle ka qaqabteen, oon war laga haynin ilaa iyo hadda meeshay ku sugan yihiin, dadka kala ah;
1- Faarax Macruuf
2- C/llaahi Mahdi Maxbuub, oo lagu qabtay Qori uu watay.
3- Jamaal Axmed Cabdi
24/05/06 Kabtii-Naag, oo ka tirsan degmada Qabridaharre, waxay ciidammada gumaysatada Itoobiya jidhdil ba�an ugu gaysteen dadka kala ah;
1- C/nasir Geeddi
2- C/raxmaan Afwayne
3- Yuusuf-qaad Dubbad
4- Maxamuud Xirsi Cagoole
20/05/06 San-cadde, oo ka tirsan degmada Dhagaxbuur, waxay ciidammada cadowgu ka afduubeen seddex nin oon ilaa iyo hadda la haynin meeshay geeyeen, waxayna kala yihiin;
1- Badri Muxumed Jalane
2- Cabdi Muxumed Nuur
3- Axmed Maxamed Dhiille
14/05/06 Qudhac-maydal, oo ka tirsan degmada Fiiq, waxay ciidammada cadowgu jidhdil ba�an ugu gaysteen dad rayad ah. Waxayna dadkan ku gadoodeen, ka dib markii lagu waxyeelleeyay dagaal meeshaas ka dhacay. Dadka ay dhibaatooyin xunxun soo gaadhsiiyeen waxay kala yihiin;
1- Maxamuud Ibraahim
2- Maxamed Xasan Daahir
3- Xamdi Caaqil Faarax iyo
4- C/nuur, oo magaciisa buuxa aanaan halin.
Waxay sidoo kale meeshaas ka afduubteen oo la tageen dadka kala ah;
1- Wali Bade Salawi
2- Maxamuud Cabdi Mawsar iyo
3- Mustafe C/llaahi Aaden.
Ma ogtahay in Dekeda magaalada Boosaaso ay sannadkiiba ka soo xerooto lacag lagu qiyaasay 23 Million oo doolarka Maraykanka. Mase ogtahay in aysan jirin wax mashaariic ah loo samayey carruurta da'da yar ee derbi jiifka ah oo wax ay quutaan ka raadsada qashin qubka magaalada (eeg sawirka hoose).
Isbedelka Saamiyada April 12-May 19, 2006 ka eeg halkan.
Warqadii uu qoray ra'iisul wasaaraha DFKMG, Cali Maxamed Geeddi, oo ku taariikhaysnayd May 18, 2006, markii ay gaartey dalka Australia waxaa durbadiiba dhulka galay saamiyadii shirkadda Range Resources. 19 May 2006 Waxa ay saamiyada Range Resources hoos u dhaceen -5.13%, taas oo kadhigtay saamiyadeeda in lagu kala iibsado sentiyaal (0.037) lacagta Australia. Arrintaasi markii ay dhacday ayaa isla markiiba (May 19, 2006) shirkada Range Resources waxay warqad u direen suuqa Ganacsiga ee Australia, warqadaas oo ay ku weydiisanayaan in gebi ahaanba la hakiyo kala iibsiga saamiyada shirkaddaasi, (TRADING HALT ama eeg halkan...), ilaa ay qoraal ka soo saarayaan ama Talaada May 23, 2006 - Xilligaas markii la garey oo aan jawaab laga helin shirkada ayaa suuqa ASX waxa uu si rasmi ah liiska uga saaray kala iibsiga saamiyada shirkadaas eeg May 22, 2006. May 25, 2006 ayey Range Resources warqad u qortay ASX ay ku muujineyso in DGPL ay taageersan tahay shirkadan, sidaasna markale loogu ogaaladay in saylada lagu kala iibsan karo saamiyadooda.).
Suuqa ganacsiga Australia waxaa lagala xiriiri karaa: Halkan....
Waxaa xusid mudan: Markii ay soo shaac bexeen iska hor imaadyada Puntland ka jirey ee la xiriirey macdanta, ayaa waxaa bishii April 12, 2006 ay saamiyada Range Resources hoos u dheceen -5%, taas ka dhigtay in lagu kala iibsado 0.038, maalintaas ayey shirkadaasi hakad gelisey saamiyadeeda (EEG HALKAN), waxana ay sheegeen in ay qoraal soo saari doonaan . Qoraalkaas waxa ay soo saareen April 19, 2006 (EEG HALKAN...) , waxana ay ku sheegeen in DGPL ay taageero dheeraad ah siiday ayaga. Waxa kale isla maalmahaas soo baxay qoraal lagu soo daabacay warbaahinta Australia ooay Range Resources ku sheegtay in aan "Qofna kuma Dhiman Hawlgalkii Puntland", waxa markaas kor u kacay saamiyadii shirkadaas waxana ay gaareen 0.050. Waxana ay markaas Range Resources oo Cadaysay in ay Puntland siiso $200,000 doolarka Maraykanka Bil kasta sida heshiisku ahaa... (EEG HALKAN... ).
Dadka arrimaha dhaqaalaha odorosa waxa ay nidaamkaas ku macneeyaan waxa afka Australia lagu yiraahdo "Market Manipulation"... (Akhir qeexidda uu arrintaas ka bixiyey suuqa Ganacsiga Australia... Akhri... ENGLISH....)
QAAR KAMID AH WARAAQAHA RANGE U DIRTAY SUUQA ASX:
25/05/2006 Puntland Update 3 PDF
25/05/2006 Reinstatement to Official Quotation 1 PDF
22/05/2006 Suspension from Official Quotation 2 PDF
19/05/2006 Trading Halt 2 PDF
02/05/2006 Heads of Agreement with Contact Resources Ltd 1 PDF
28/04/2006 Third Quarter Activities & Cashflow Report 10 PDF
26/04/2006 Assay Results from Preliminary Sampling in Puntland 4 PDF
21/04/2006 Korea National Oil Corporation Letter of Intent 1 PDF
20/04/2006 Further Government Support for Range in Puntland 3 PDF